शाहिद कपुरकी पत्नी मीरा राजपुतले भिडियो शेयर गरेपछी एका एक चर्चामा, मिराको ओठ एक्कासी ठुलो देखेपछी फ्यानहरू एकदमै हैरान! (भिडियो सहित) - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / शाहिद कपुरकी पत्नी मीरा राजपुतले भिडियो शेयर गरेपछी एका एक चर्चामा, मिराको ओठ एक्कासी ठुलो देखेपछी फ्यानहरू एकदमै हैरान! (भिडियो सहित)
बलिउड अभिनेता शाहिद कपुर र मीरा राजपूत बी टाउनका निकै चर्चित जोडीमध्ये एक हुन् । बलिउडका चलेका नायक शाहिद कपुरकी पत्नी मिरा राजपूत फिल्ममा देखिएकी छैनन् तर सामाजिक सञ्जालमा उनको फ्यान फलोइङ कुनै अभिनेत्रीको भन्दा कम छैन ।
हालै उनको एउटा भिडियो एकदमै भाइरल भएको छ । अभिनेता शाहिद कपूरकी पत्नी मिरा राजपूत सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहन्छिन्। फ्यान सँग धेरै जसो फोटो तथा भिडियो शेयर गरिरहेकी हुन्छिन् मिराले ।
हालै उनले आफ्नो इन्ष्टामा एउटा यस्तो फोटो हालेकी छिन् जसलाई देखेर सबै फ्यानहरू एकदमै हैरान भएका छन् । फोटोमा देखिएको छ कि उनले आफ्नो ओठ सर्जरी गरेकी छिन् । मिराको यो फोटो एकदमै तीव्र रूपमा भाइरल भइरहेको छ । उनले आफ्नो इन्ष्टा स्टोरीमा एउटा भिडिओ पोस्ट गरेकी छिन् ।
जसमा उनको स्किन काफी ग्लोइंग देखिएको छ भने ओठ पनि एकदमै मोटो देखिएको छ । मिराको यो भिडिओ देखेर फ्यानहरू एकदमै हैरान भएका छन् । मिराको यो भिडिओमा लाखौँले कमेन्ट गरिसकेका छन् भने लाईक्स पनि धेरै नै आइरहेको छ ।